हसनरजाको ग्याङ - मेरो अनुभव - साप्ताहिक
हसनरजा खान, नायक
नायक संजोग कोइराला, नायिका वर्षा राउत, नायिका तथा मोडल ओसिमा बानु, मोडलद्वय निराजन प्रधान र विनोद न्यौपाने एवं व्यवसायी अमृत अग्रवाल ।
किन छन् उनीहरू तपाईंसँग नजिक ?
सेलिब्रेटीका साथै व्यवसायी पनि भएकाले संजोगसँग निकै सरसल्लाह गर्छु । ओसिमा मेरो छायांकनरत चलचित्र ‘रोमियो’की नायिका हुन् । वर्षा, निराजन तथा विनोदसँग चाहिँ ख्याल ठट्टा भैरहन्छ । अमृतसँग व्यापारका विषयमा सल्लाह लिन्छु ।
उनीहरूको कुनै बानी त मन पर्दैन होला नि ?
संजोग व्यवसायमै व्यस्त छ, चाहिएको बेला भेट हुनै गाह्रो । ओसिमासँग खासै गुनासो छैन । वर्षा, निराजन र विनोदसँगको भेटमा मेरो बोली नै बन्द हुन्छ । उनीहरू नै बोलिरहन्छन् । अमृतचाहिँ हत्तपत्त खुलेर कुरा गर्दैनन् ।
पुरानो ग्याङ कस्ता थिए ?
नायक आर्यन सिग्देल, मोडल आयुष्मा श्रेष्ठहरू थिए । हामी हरदम साथै हुन्थ्यौं । रियल्ली मिस दोज डेज।
अहिले छैनन् ?
आर्यनसँग कुरै हुँदैन, खासै सम्बन्ध बिग्रिएको पनि होइन । आयुष्मा विदेशमा छिन् ।
नाम वकिल मियाँ भए पनि पेसाले वकिल होइनन्, उनी मेरा पहिलेदेखिका मित्र हुन् ।
ग्याङमा नभए पनि एकदमै मिल्ने ?
मोडल तथा व्यवसायी अज्जु अर्थात् अजय पोखरेल । ऊ अल द टाइम मेरो ग्याङमा नभए पनि नजिक छ।
निशा अधिकारी, उनी ‘रोमियो’की नायिका पनि हुन् ।
अभिनेत्री पूजा शर्माको गल्ती भाद्र २४, २०७६